Uhuru Kenyatta oo wasaaradda tacliinta ku amray inay soo saarto jadwalka 2021-ka – Radio Damal
Uhuru Kenyatta oo wasaaradda tacliinta ku amray inay soo saarto jadwalka 2021-ka
Madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta ayaa mar kale carrabka ku adkeeyay in maamulka talada haya ee Jubilee ay ka go’an tahay sidii ardayda guriyaha ku sugan ay dib ugu laaban lahayeen dugsiyada marka la gaaro sannadka dambe.
Waxaa uu wasaaradda waxbarashada ee dalka ku amray in ay soo saarto jadwalka howlaha tacliinta ee sannadka 2021-ka.
Mr. Kenyatta ayaa wasiirka waxbarashada Prof. George Magoha iyo mas’uuliyiinta kale u qabtay muddo 14 cisho ah oo ay jadwalkan ku soo bandhigayaan.
Hoggaamiyaha dalka ayaa ku nuuxnuuxsaday in wasaaraddu laga doonayo ka shaqeynta iyo xaqiijinta sidii dhammaan ardayda ay u sii wadan lahayeen waxbarashadooda.
12-kii bishii hore ayay ahayd markii dib loo furay fasallada afaraad iyo sideedaad ee dugsiyada hoose dhexe iyo fasalka afaraad ee dugsiyada sare.
Dowladda ayaa sheegtay inuusan waxba iska beddelin qorshaha si tartiib ah loogu furayo goobaha waxbarashada iyadoo dhanka kale lagu dadaalaya in ardayda laga badbaadiyo caabuqa corona.
Madaxweyne Uhuru ayaa xilli uu shalay baarlamaanka ka jeediyay khudbadda qaran ee sannadlaha ah sheegay in waalid iyo awoow ahaan uu dareemaya walaaca ay muujinayaan waalidiinta hasa ahaate ay tixgelinayaan badqabka carruurta.
Hoggaamiyaha dalka ayaa dhanka kale sheegay in dowladda ay horumar wax ku ool ah ka gaartay qorshaha lagu xaqiijinayo in boqolkiiba boqol ardayda dhameeyay dugsiyada hoose dhexe ay u gudbaan dugsiyada sare.
Dugsiyada dalka ayaa la xiray bartamihii bishii saddexaad ee sannadkan xilligaas oo kiiskii ugu horreeyay ee coronavirus lagu arkay gudaha dalka.